Shina nohavaozina mahery elektrika totozy repeller mpandroaka fanoherana anti-ratana mpamono olona famonoana bibikely famonoana moka handà ny fandrika orinasa sy mpanamboatra | Jinjiang
Anaran'ny marika: DY, DY
Laharana modely: DY-107
Karazan-bibikely: Ants, tantely, Voangory, Borer, Earwigs, lalitra, tandroka, totozy, totozy
Fahafahana: 1, 100000 - 1000000
Ampiasao: fifehezana biby, toeram-piompiana, fifehezana bibikely, Fehin-tànana famonoana moka, fametahana moka, fanadiovana / fitehirizana, zavamaniry & zaridaina, trano & perimeter, SANITARY, fanalana fofona / fanalana fofona, fandrahoan-tsakafo, fampangatsiahana, fisotro / sakafo, hafanana
Famaritana:> faribolana 30
Famatsiana herinaratra: batterie azo averina voaorina
Fampiasana: Rafitra fanafoanana ny Rodentika Ultrasonic mandroso
Karazana marani-tsaina: fanaraha-maso ny feo
Fotoana: Fety, fampakaram-bady sy fifamofoana, fampakaram-bady, fizarana diplaoma
Ilaina ny bateria: tsia
Marika manokana: eny
Fampiharana: Birao, efitrano fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, anaty trano, ivelan'ny trano, faritra fanasan-damba, lavarangana, efitrano fisakafoana, efitra fandroana, lalantsara, habakabaka
Smart Device: eny
Vanim-potoana: A / W
Anaran'ny vokatra: Fehiloha moka
Fahaiza-mamatsy: 1000 Piece / Pieces isan'andro
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 4 5 - 10 > 10
Est. Fotoana (andro) 8 15 Hifampiraharahana
Fepetra fandoavana: L / C; D / A; D / P; T / T; Western Union, MoneyGram
Fahaizana manome: 1000.0 Peice / Peices isan'andro
Anarana Rafitra fandresen-dahatra ultrasonie mandroso
Loko Volondavenona karbonika Volondavenona fotsy
[Natokana amin'ny famoahana Rodent]: Tsy toy ny mpanala bibikely hafa eny an-tsena, ny sakafon'ny totozy ultrasonic antsika dia natao hitodika any amin'ny totozy, voalavo, sakafom-biby ary biby mpikiky hafa. Ny fifehezana ny totozy no hahazo ny vokatra tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vokatra.
[Fiasan'ny Mode Twin]: ny ultrasonic rodent repellent dia mampiasa chip marani-tsaina farany ary manana fomba fiasa roa izy io .Ny fomba hafa dia mamoaka onjam-peo isan-karazany. Ny onjam-peo avy amin'ny famoahana totozy dia hanaitra ny rafitry ny totozy sy ny ati-doha. Totozy, voalavo, squirrels ary ny biby mpikiky hafa dia tsy mahazaka ny feo ka handao ny tranonao izy ireo.
[100% Azo antoka ho an'ny olombelona sy ny biby]: Tsy misy akora simika, tsy misy famonoana. Ity famonoana totozy ultrasonika ity dia vita amin'ny akora maharitra afo AP, maharitra sy sariaka amin'ny tontolo iainana. Tsy manimba ny zanakao sy ny biby fiompinao izany. Ary tsy hamono ireo biby, avelao izy ireo hivoaka ny tranonao.
[Fandrakofana mahomby]: Ny elanelam-bidin'ireo mpamadika totozy anay dia 155000 santimetatra toradroa. Ampiasaina be amin'ny efitrano fandriana, lakozia, efitrano, trano fitehirizana, birao, hotely, sns. Mamporisika anao izahay hametraka mpikabary biby mpikiky isaky ny efi-trano satria ny ultrasound tsy afaka miditra amin'ny rindrina sy ny solids.
Manafika tsy tapaka ny tranonao, trano fitobiana, fivarotana na toerana misy ny birao ve ireo biby mpikiky kely? Manaikitra tariby ao an-tranonao ve ny biby goavam-be? Tsy misy olana, vonona izahay hanolotra famoronana vaovao hiadiana amin'izy ireo - mpanala totozy ultrasonika. amin'ny hafanana samihafa, izay afaka mandroaka ny biby mpikiky. Ny fitaovana dia azo apetraka ao amin'ny efitrano rehetra ary tsy mampiasa zavatra misy poizina mandritra ny asa.
Fitaovana fiarovana: fiara mifono vy miorina anaty
Frequency input: 25-65kHz
TOSIKARATRA fidirana: 90V-250V
Size: 92 * 73 * 6m
Temperature miasa: -15 Celsius -60 Celsius
Temperature Perating: -10 Clesius ~ 60 Celsius
Humidity miasa: latsaky ny mitovy 85% RH
Humotra mamelombelona: tsy latsaky ny 85% RH
1.Mba tazomy ny elanelana amin'ny karipetra, curtaun ary ny fitaovana fanamafisam-peo rehetra izay mety hampihena ny vokatry ny fanafody fanafody.
2.Ny ultrasound rodent repellent dia manana fomba fiasa roa: Mode1 (jiro mavomavo dia miposaka miadana), Mode2 (jiro mena sy mavo mifandimby mifandimby). Tsy afaka mandre ny Mode 1 isika fa ny Mode 2 dia maheno ny sofin'olombelona. hampiasa Mode 2 raha amin'ny iray dia ao an-trano.
3.Aza mampiasa solvents matanjaka, rano na lamba mando hanadio ny «réparent».
Karazana plug: US Plug, mihatra amin'i Canada, India, Japan, Mexico, Thailand, Taiwan, Etazonia, rhe Philippines sns.
Ny atiny fonosana etsy ambony ihany, ny vokatra hafa dia tsy ampidirina.
Fanamarihana: ny fitifirana maivana sy ny fampisehoana samihafa dia mety hahatonga ny lokon'ilay zavatra eo amin'ny sary ho fako tsy mitovy amin'ny tena izy. Ny fandrefesana nahazoana alalana dia +/- 1-3cm
F1: Inona ny MOQ?
A1: 200PCS ho an'ny volavolantsika misy.
F2: Azoko atao ve ny maka santionany amin'ny vokatra?
A2: Ie, raisinay ny santionany mba hitsapana sy hijerena ny kalitaony.
F3: Ahoana ny amin'ny fotoana itarihana?
A3: Ny santionany dia mila 3-5 andro, ny fotoana famokarana betsaka dia mila 1-2 herinandro ho an'ny habetsahan'ny filaminana mihoatra ny.
F4: Ahoana ny fomba andefasanao ny entana ary haharitra hafiriana vao tonga?
A4: Matetika amin'ny alàlan'ny DHL, UPS, FedEx na TNT no alefanay matetika, 6-9 andro vao tonga izany. Tsy voatery koa ny sidina an-dranomasina sy ny ranomasina.
F5: Mety ve ny manonta ny sary famantarana ny vokatra?
A5: Eny, azafady mba ampahafantaro anay ara-dalàna mialoha ny famokarana anay ary hamafiso aloha ny volavola mifototra amin'ny santionanay.
F6: Manome antoka momba ny vokatra ve ianao?
A7: Ampahafantaro anay aloha ny zavatra takinao na ny fampiharana anao. Faharoa, manonona izahay araka ny zavatra takinao na ny soso-kevitray. Manamafy ny santionany sy ny toerana apetraka ho an'ny filaminana ara-dalàna ny mpanjifa telo ambiny, fahefatra, mandamina ny famokarana izahay.
Teo aloha: American standard and European standard Electronic ultrasonic pest repeller for mouse roach mosquito pest repeller
Manaraka: Sweettreats Mamonjy angovo Ultrasonic Pest Repeller Ant An-trano Elektronika bibikely famonoana bibikely voalavo bibikely
New Pest Control Ultrasonic Repeller nohavaozina E ...
New Listing Easy Use Pest Control Tool Electron ...